Home » Isekọ akụkọ njem » Princess Cruises na-ekwuwapụta ụgbọ mmiri 2022-2023 Mexico, California, Hawaii na Tahiti
Princess Crown, Princess Princess, Princess Princess, Ruby Princess na Sapphire Princess ga-aga ebe 25 na mba isii.
Princess Cruises na-enye ọpụpụ 78 na 19 njem njem pụrụ iche sitere na Los Angeles, San Francisco na Vancouver
Princess Cruises bụ naanị otu ụgbọ mmiri na-enye mgbe niile na-agagharị na California Coast iconic
Oge 2022-2023 na-enye njem ụgbọ mmiri na Mexico, California Coast, na Hawaii & Tahiti
Princess Cruises dị nnọọ mara ọkwa oge 2022-2023 ya na onyinye siri ike nye Mexico, California Coast, na Hawaii & Tahiti. Na ire ire Eprel 28, 2021, ngụkọta nke ụgbọ mmiri isii, gụnyere nke kachasị ọhụụ Princess Princess, na-enye ọpụpụ 78 na 19 njem njem pụrụ iche sitere na Los Angeles, San Francisco na Vancouver.
Onye isi okpueze, Princess Princess, Princess Princess, Ruby Princess na Sapphire Princess ga-eleta ebe 25 na mba isii na-enye Princess MedallionClass Ahụmahụ - nke kachasị na-enweghị isi, na-eme njem ụgbọ mmiri.
Princess njem ụgbọ mmiri anọwo na-aga Mexico maka ihe karịrị afọ 55, na-ewetara ndị ọbịa kachasị mma nke Mexico Riviera na-akọwapụta ihu igwe ọkụ na anwụ na-acha, ọdịbendị bara ụba na nke dịgasị iche iche na ụtọ oriri nke mpaghara ahụ. Ihe ngosi oge 2022-23:
· Shipsgbọ mmiri MedallionClass anọ - Princess Princess, Crown Princess, Ruby Princess, na Sapphire Princess
· Ebe asatọ na mba abụọ gụnyere ọdụ ụgbọ mmiri ndị achọrọ na Puerto Vallarta, Mazatlán na Cabo San Lucas
· 29 ngụkọta ọpụpụ na njem njegharị anọ pụrụ iche, sitere na ogologo site na ise ruo ụbọchị iri
· Discovery Princess na-alaghachi maka oge nke abụọ nke West Coast na-aga njem njem ụbọchị ise na ụbọchị asaa site na Los Angeles
· Njem njem ụbọchị ise ọ bụla gụnyere ịnọ abalị na Cabo San Lucas
· Ruby Princess na-ebu ụgbọ mmiri 10 ụbọchị Mexico Riviera ụgbọ mmiri gburugburu San Francisco
· Sapphire Princess na Discovery Princess na-ebu ụgbọ mmiri 10 ụbọchị Baja Peninsula & Sea nke Cortez roundtrip si Los Angeles